अझै सुघ्रिएन काँग्रेस - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र २६, २०७६ समय: ६:४९:०३
नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको १०६ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर नेपाली काँग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सुनसरीबाट सुरु गरेको छ ।
विपी कोइरालालाई वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३३ बाट अत्याधिक मतले जिताएर प्रमथ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउन सफल सुनसरीबाट काँग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु गरेको हो ।
विपी कोइरालाको आर्दश बोकेको काँग्रेसकै नेतृत्वमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४८सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा सुनसरीबाटै काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित भएर मुलुकको दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भयो । काँग्रेसको राजनितीकमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएको जिल्लाको रुपमा समेत परिचित सुनसरीलाई आधार बनाएर काँग्रेसले जागरण अभियान सुरु गरेको हो । मुलुकमा भएका सबै ठुला परिवर्तनहरुको नेतृत्व गरेको काँग्रेस वि.सं. २०७४सालमा भएका स्थानीय ,प्रदेस र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित बन्न पुग्यो । काँग्रेसको पराजय र मुलुकमा दुई तिहाईको कम्युनिष्ट शासन सुरु भयो ।
मुलुकमा दुई तिहाईको सरकार भएपनि जनताले सरकार भएको अनुभुति गर्न सकिरहेका छैन । सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधीमा मुलुकमा कर तथा महगींले जनता आक्रान्त बन्दै आएका छन । सरकारले पे्रस तथा मानव अधिकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने विदेयक अघि सारिरहेको छ । यी र यस्तै सरकारका गतिविधिहरुले सरकार अधिनायकवाद तर्फ अघि बढेको भन्दै काँग्रेसले जनतामा जागरण ल्याउने साथै आफनो संगठन विस्तार गर्ने योजना सहित राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालनमा ल्याएको वताइन्छ ।
सरकारले गरेका कमी कम्जोरीहरु जनतालाई अवगत गराउदै सरकारलाई खबरदारी र संगठन विस्तारका लागि सुरु गर्ने जागरण अभियानमा जनताका कुरा धेरै सुन्ने र नेताहरुले कम बोल्ने भने निणर्य गरेको भनिएपनि सुरुवातको कार्यक्रमनै नेताहरुको एक पक्षिय दिक्क लाग्दो भाषण सुन्न बाध्य भएका थिए कार्यक्रममा सहभागी सर्वसाधारणहरु ।
जागरण अभियान सुरुवात कार्यक्रमलाई हेर्दा काँग्रेसले विगतका कमीकम्जोरीहरु सुधार गरी जनताको माझमा आएको ठानिएपनि काँग्रेस अझै सुघ्रिएको देखिएन । काँग्रेसको जागरण अभियानमा यस्ता यस्ता कमी कम्जोरी देखियो । जागरण अभियानको सुभारम्भ कार्यक्रमका लागि भनेर विहान ११ बजेका लागि प्रचार गरिएपनि कार्यक्रम २ बजे मात्र सुरु गरियो । नेतामुखी पाटी भनेर आरोप खेप्दै आएको काँग्रेसको कार्यक्रममा हुने भद्धा आसन ग्रहणले पनि करिव एक डेढ घण्टा समय लिएको थियो । उद्घोषकले बक्ताहरुलाई ३ मिनेटको समय दिएपनि बक्ताहरुले समयको ख्याल नगरी लामो भाषण ठोक्ने काम गरे । बक्ताहरुले पाटीको सभापति बक्ता भएको बिर्सिए झै लाग्थ्यो । कार्यक्रममा २० जना जति बक्ताहरु राखिनु, मञ्चमा अव्यवस्थित भिड हुनु, प्रमुख अतिथीले बोल्दा साझँ परि सक्नु, यस्ता कमी कम्जोरी नसुधारी आएको कारणले जागरण अभियान खल्लो र दिक्क लाग्दो भएको कार्यकर्ताहरु समेतले गुनासो गरिरहेका थिए ।
तथापी पाटी सभापतिको भाषण सुन्न एक चौथाइ जती सर्वसाधारण , स्थानीय नेता कार्यकर्ता साझँ सम्म बसेका थिए । टाढाटाढाबाट आएकाहरुलाई घर फर्कन समस्या हुने गरि गरिएको कार्यक्रमले काँग्रेस अझै सुघ्रन बाँकी देखियो ।
काँग्रेसले जागरण अभियानलाई सहि रुपमा अघि बढाउने हो भने निम्न कुराहरुमा ध्यान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने सुरुवात कार्यक्रमले पाठ सिकाएको छ । कार्यक्रमलाई छोटकरीमा सञ्चालन गर्ने , कम बक्ता राख्ने , धेरै कुरा सर्वसाधारणका सुन्ने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी पहिले सर्वसाधारणका कुरा सुनी सकेपछि मात्र नेताहरु बोल्ने । स्थानीय स्तरमा भई रहेका गतिविधिहरुले राजनैतिक रुपमा पारिरहेको प्रभावलाई सर्वसाधारण तथा आफना भातृ एवम सुभेच्छुक संस्थाहरुबाट जानकारी लिने । गफ हैन काम गर्ने पाटी हो भन्ने सर्वधारणलाई विस्वास दिलाउने खाले कार्यक्रम गर्ने । आफनो पाटी सरकारमा भएका बेलामा गरेका राम्रा कामहरुको विषयमा सर्वसाधारणमा जानकारी गराउने तर्फ जागरण अभियान केन्द्रीत बन्नु पर्छ ।
सुरुवात कार्यक्रममा भने त्यस्तो देखिएन , सात घण्टा पर्खिएर ४ मिनेटको भाषण सुन्नु सर्वसाधारणले सास्तीका रुपमा मात्र लिएका छन । काँग्रेसले त्यस तर्फ ध्यान दिओस । आगामी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित वनाउदै अघि बढोस ।